समाज सुधारको दायित्व कसको ? | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
समाज सुधारको दायित्व कसको ?
आजको नया“ नेपालमा अनगिन्ती विकृतिहरुको प्रवेश भएकोले सबै नेपालीले चिन्ता लिनु सामान्य भएको छ । सामाजिक विकृति आएको कुरा ठोस रुपमा भन्न नसकिनाको कारण के भने यस्ता कुराहरु नया“ नेपाललाई सघाउ पुर्याउन आएका हुन वा विकृतिको रुपमा त्यो पनि एक अध्ययनकै विषय बनेको छ । हामीले भन्दा कसैको मानव अधिकारको हनन् भएको नठहरियोस् तर भन्नै पर्नेमा विवाह, ब्रतबन्ध, श्राध्यहरुमा सिमित व्यक्तिहरु आफ्ना नातेदार बढीमा २५ जनालाई भोजभतेरमा र वार्षिकी श्राध्यहरुमा मलामी बाहेक पनि २५ जना सम्मकालाई भोज भतेरमा सामेल गर्न सकिने भनेको छ, समाज सुधार ऐनमा हामी सबैका सामु छ विवाहमा निमन्त्रणा दिदा आफन्तलाई मात्र नदिई मतदाता नामावलीलाई समेत आधार बनाई निमन्त्रणा दिने बढी तडकभडक गर्ने प्रचलनमा
बढोत्तरी भएको छ । रकमको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी भएको छ । कसै कसैले त देखासिखी आडम्बरीपनाले गर्दा क्षमता भन्दा बढी कर्जा झिकेर खर्च गरी कैयौ वर्ष सम्म तिर्न नसकेका तथ्यांक पनि छन् । विकृतिको नाममा थप वर्षभरी गाई दोहन गरी दुध खाई अन्तमा थागेपछि मध्यरातमा घरबाट निकाली अर्काको खेतवारीमा छोडेर जाने घृणित कार्यको पनि नया“ सुरुवात भएको छ । त्यस्तै विकृतिहरु हेर्दै जादा स्कुल बन्द गर्ने गराउनेमा पनि व्यापकता नै भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख न सरकारबाट भएको छ न समाजबाट, साझा सम्पत्तिमा जसको बल चन्छ उसैले कब्जामा लिएको छ र लिने प्रचलनले बढावा पाएको छ । सडकमा हिन्दा विद्यार्थी तथा जो कोही पनि सडकमा निर्धक्क जान नपाउने तरिकाले अरु यात्रुलाई आवत जावतमा बाधा पर्ने गरी हिडी रहेका हुन्छन् । चौराहाहरुमा सडकमा उभिएर गफ गरेका हु“दा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बृद्धि भएको छ । मोटरसाईकल चालकहरुले ट्राफिक नियमको पालना गरेको पाईदैन भने टेम्पो रिक्सा वालाहरुका हाल पनि त्यस्तै छन् । मोटरसाईकलका मालिकहरुले गाउघरका सडकहरुमा धेरै जसो आफ्ना बालक छोराछारीेलाई चलाउन दिएको पाइन्छ । र दुर्घटना पनि गरेकै हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीहरुले रोकाउदा पनि
हरेक नागरिकलाई ऐन नियम भित्र राख्ने काम सरकार तथा नेताहरुको अवश्य हो । समाज सुधारको लागी हरेक
नगरपालिका, गाउ“पालिकाहरुले विशेष ध्यान पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साझा सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु रेखदेश नगर्नु पनि सामाजिक विकृतिकै रुप भएकोले नगरपालिकाले खास गरी बजारको अवस्था स्थानीय पार्क तथा राखिएका शालिकहरुको अवस्था रेखदेख
संरक्षणतर्फ पनि ध्यानु पुर्याउनु राम्रो हुन्छ । सार्वजनिक स्थानमा नक्सा पास नगराई घर बनाउनु जसको जे मन लाग्यो त्यो गर्नु साझा सम्पत्ति हेर्दा हेर्दै लुट्नु लुटाउनु पनि सामाजिक विकृति नै भएको हु“दा त्यसतर्फ ध्यान दिनै पर्दछ । आज अख्तियार दुरुपयोगको नाममा व्यापारी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम सरकारी निकायबाट भैरहेको देखिन्छ त्यो पनि सामाजिक विकृतिको नया“ रुप हो
भन्ने हामी ठान्दछौ र हरेक किसिमको विकृति रोक्ने प्रयास हुनै
← छयालिस साल पछिको उपलब्धि
रेशम चौधरीद्वारा अदालतमा अात्मसमर्पण →